Laasqoray, 18 Jan 2015 (Alldhooftinle.com)
Waddama Badan Ayaa Ganaaxa Hal Dembi Uu U Kala Badan Yahay Sida Loo Kala Taajirsan Yahay. Haddaad Faqiir Tahay Wax Badan Lagu Ganaaxi Maayo, Sidaana Waxa Ka Xanaaqsan Tijaarta
Nin taajir ah oo la yiraahdo Anders Wiklof una dhashay dalka Sweden ayaa la ganaaxay 80 kun oo giniga Ingiriiska ah ka dib markii uu gaadhigiisa ku kaxeeyey xawaare ka badan ka loo ogol yahay wadada uu marayey. Ninkan maalqabeenka ah ayaa ka carooday kuna tilmaamay waxaan la qaadan karin sharciyada wadamada Scandinavian laysku yiraahdo (Denmark,Finland, Sweden iyo Norway) oo ganaaxa qofka ku xidhaya lacagta uu haysto.
Anders wuxuu sheegay in qofka faqiirka ah ee denbigiisa oo kale sameeya la ganaaxo 385 geni, halka isaga laga rabo inuu bixiyo 80 kun oo geniga Ingiriiska ah. Wuxuu ku dhaartay inaanu lacagtaa bixin doonin ayna tahay dulmi loo geysanayo dadka lacagta leh.
Baarlamaanka iyo xukuumada Sweden ayaa sheegay in sharcigani aanu cusbayn mudo badana lagu soo dhaqmayey sidaa darteed aanay garanayn waxa maalqabeenka ka cadhaysiiyey. Waxaa kaloo la shaaciyey in hadii uu sadex bilood ku bixin waayo lacagtaa laga qaadi doono liisanka baabuurta, taasoo ugaba sii daran lacagta uu hadda ka doodayo.
Anders Wiklof ayaa ku socday xawaare ah 77km/h, iyadoo wadadaa sharci ahaan lagu mari karo 50km saacadiiba. Waa la ogaan doonaa inuu ku guuleysto bedelista sharcigaa iyo inuu waayo liisankiisa, sidii ay noqotoba wuxuu ku guuleystay inuu dadka indhahooda ku soo jeediyo hal dembi oo hadana ciqaabo kala duwan leh.